अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर र एचडियू बनाउन ४ अर्ब ३१ करोड बजेट, कुन अस्पताललाई कति? – नेपाली संगसार
अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर र एचडियू बनाउन ४ अर्ब ३१ करोड बजेट, कुन अस्पताललाई कति?
नेपाली संगसार calendar_today ३ जेष्ठ २०७८, 2:23 pm
काठमाडौं । कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र नाै वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि दुई अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको हो।
यस्तै, केन्द्रीय र प्रदेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडीयू स्थापनाका लागि एक अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ।
कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माग अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो।
कुन अस्पताललाई कति बजेट?